थाइराइड के हो? यसको समस्या किन हुन्छ? - शैली न्युज
थाइराइड के हो? यसको समस्या किन हुन्छ?
११ श्रावण २०७६, शनिबार ०४:३५
थाइराइड भनेको एक प्रकारको ग्रन्थी हो। यो ग्रन्थी घाँटीमा रुद्रघण्टीको अलिकति तल रहेको हुन्छ। यो ग्रन्थी पुतलीले पखेटा फट्यायर बस्दाको जस्तो अकारमा देखिन्छ। मुख्यरुपमा थाइराइड ग्रन्थीले ‘टी-३’ र ‘टी-४’ हर्मोनहरु उत्पादन गर्ने गर्छ।
धेरै त यो ग्रन्थीले ‘टी-४’ हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ। थाइराइड ग्रन्थीले उत्सर्जन गर्ने हर्मोनसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगहरु छन्। जसमध्ये हर्मोनको बढी उत्पादनका कारण लाग्ने रोग हाइपरथारोडिजम हो।
त्यस्तै, हर्मोन थोरै उत्पादन भएर लाग्ने रोग जसलाई हाइपोथारोडिजम भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीं थाइराइड ग्रन्थीको समस्याका कारण क्यान्सर हुने जोखिम पनि बढ्ने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा थाइराइडसम्बन्धी अध्ययनलाई हेर्दा प्रायजसोमा देखिएको समस्या भनेको हाइपरथारोडिजम हो।
कतिपय बिरामीले मलाई थाइराइड भएको छ भन्नुहुन्छ, अथवा थाइराइड बढेको छ भन्नुहुन्छ, तर खासमा थाइराइड बढेको होइन, त्यो त थाइराइडले उत्सर्जन गर्ने हर्मोनको कमी भएर थाइराइड स्टुमिलेटिङ हर्मोन बढी हुने अवस्था हो। रोग प्रतिरक्षा प्रणालीमा समस्या हुँदा यो रोग अर्थात् हाइपरथारोडिजम र हाइपोथारोडिजम लाग्ने गर्छ। त्यसकारण यसलाई ‘अटो-इमुन डिजिज’ पनि भन्ने गरिन्छ।
थाइराइड ग्रन्थी मानव शरीरकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्रन्थी हो। जुन ग्रन्थीले उत्पादन गरेको हार्मोन ‘टी-३’ र ‘टी-४’ले शरिरको सम्पूर्ण प्रणालीमा भएका अंगहरुलाई ‘मेटाबोलाइज’ गर्छ। भन्नुको मतलब हामीले खाएको खाना कोषिकाहरुमा गएर त्यसलाई शक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि सहयोग गर्छ। जसले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नुका साथै कोषका भित्रका संरचनाको नवीकरण पनि गर्छ।
यी हर्मोनको असन्तुलनका कारण शरीरमा धेरै समस्या देखिने गर्छ। हाइपरथाइरोडिजम अर्थात् हर्मोनको बढी उत्पादन हुँदा महिलाहरुमा छिटो-छिटो महिनावारी हुने, मुटुको धड्कन तेज हुने, रिस उठ्ने, गर्मी सहन नसक्ने, छिटो उत्तेजना बढ्नेजस्ता समस्या देखिन्छ। त्यस्तै हर्मोनको कम उत्पादन हुँदा कब्जियत हुने, तौल बढ्ने, कपाल झर्ने, थकान महसुस बढी हुने, महिनावारी गडबढी हुनेजस्ता समस्या देखिन्छ।
गर्भावस्था र थाइराइडको कुरा गर्नुपर्दा गर्भ रहेको १८ हप्तापछि मात्रै बच्चामा थाइराइड बन्न सुरु गर्छ। त्योभन्दा अगाडि बच्चामा आमाकै थाइराइड ग्रन्थीबाट हर्मोन आपूर्ति भइरहेको हुन्छ। यदि गर्भवती नहुँदा देखिनै आमाको थाइराइड ग्रन्थीले कम मात्रामा हर्मोन उत्पादन गरिरहेको छ भने बच्चामा असर देखिन्छ। यसकारण गर्भावस्थामा गर्भ जाँच गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
यदि हर्मोन कम उत्पादन भइरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गर्न सकिन्छ। जसले बच्चामा हर्मोनको कमी हुन दिँदैन र बच्चाको मानसिक र शारीरिक वृद्धि विकासमा सहयोग पुग्दछ।
हाइपोथाइरोडिजम भएकी महिलाले बच्चा जन्माउँदा धेरै कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै- प्रत्येक त्रैमासिकमा चिकित्सकसँग जाँच गराउनुपर्छ, औषधिको सेवनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कुनै औषधि खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी औषधिको मात्रा र सेवान गरिने समयले पनि विशेष महत्व रखेको हुन्छ।
४ देशले नियन्त्रणमा ल्याए ‘हेपटाइटिस बि’
रसुवामा पहिरोले गाडी पुरियो, २ जनाको ज्यान गयो